‘हवल्दार सुन्तली’ बायोग्राफी होईन, एउटा घटनाले उब्जाउने कथा हो: ऋषि लामिछाने « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘हवल्दार सुन्तली’ बायोग्राफी होईन, एउटा घटनाले उब्जाउने कथा हो: ऋषि लामिछाने
Published On : April 8, 2015
करिव २२ वटा चलचित्रमा एशोसियट निर्देशक भएर काम गरेका निर्देशक ऋषि लामिछाने निर्देशित चलचित्र ‘हवल्दार सुन्तली’ नयाँ बर्षको अवसर पारेर चैत २७ गते देशव्यापी रिलिज हुँदैछ । टेलिभिजनमा करिब पाँच सय भाग टेलिश्रृंखला निर्देशन गरेका लामिछानेले चलचित्र ‘कहिँ मिलन कहिँ बिछोड’बाट ठुलोपर्दाको निर्देशनमा डेब्यू गरेका थिए । त्यसपछि सुपरहिट चलचित्र ‘आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ’ लगाएत ‘श्रीमान श्रीमती’, ‘हाम्रो माया जुनीजुनीलाई’, ‘सरि ल’ लगाएतका चलचित्र निर्देशन गरेका लामिछाने द्वारा निर्देशित पछिल्लो चलचित्र ‘हवल्दार सुन्तली’मा शिल्पा पोखरेल, सविन श्रेष्ठ र किशोर खतिवडाको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
आफ्नै सहकर्मीबाट बलात्कृत प्रहरी हवल्दार सुन्तली धामीको जीवनमा घटेको एक घटनालाई मुख्य आधार मानी तयार यो चलचित्र सुन्तली धामीको पुरै जीवनमा आधारित नभएको निर्देशक लामिछानेले बताएका छन् । प्रस्तुत छ निर्देशक ऋषि लामिछानेसँग ठुलोपर्दा डटकमका जीवन पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
१. छविराज प्रोडक्शनमा पहिलोपटक काम गर्नुभएको छ । धेरै स्टार जन्माएका छवि ओझासँग काम गर्न पाउँदा कस्तो महशुस भईरहेको छ ?
म पनि अरु भन्दा पृथक हुन सक्दिन । मैले पनि एउटा कर्म गर्ने हो । सम्झौता गरेको चार बर्षपछि मैले यो ब्यानरमा काम गरेको हो । सम्झौता पछि खासै महत्व नदिई अरु काम गरेँ । जतिबेला म फ्रि भएँ अनि यहाँ आएर काम गर्छु भनेको हो । म यहाँ आउनुभन्दा पहिला म यो ब्यानरमा काम गर्न लालायित थिइन । जब मैले ‘हवल्दार सुन्तली’ यहाँबाट गरेँ र चलचित्रप्रति छवि ओझाको जुन त्याग छ त्यस्तो मान्छेसँग काम गर्न पाउँदा अब चाहिँ म लालायित हुन्छु । अब म यो ब्यानरमा काम गर्दा भाग्यमानी ठान्छु । आगामी दिनमा पनि यस्तै कामहरु यहाँबाट गरिरहन पाउँ भन्ने लागेको छ । हिजोको दिनमा त्यस्तो लाग्दैनथियो ।
२. हिजोका दिनमा किन लाग्दैनथियो ?
मैले यो प्रोडक्शन बाहिरबाट काम गर्दा पनि सफलता हात पारेकै थिएँ । त्यसकार सफलताको लागी मात्रै मैले यो प्रोडक्शनमा आउनु थिएन । तर, यो प्रोडक्शनमा काम गरिसकेपछि अनि मात्र मलाई महशुस भयो ।
३. भनेपछि तपाईँको विचार सफल हुन चाहने मात्र छविराज प्रोडक्शनमा आउँछ भन्ने थियो ?
थिएन, थिएन । यहाँ आउनको लागी मानिसहरु मरिहत्ते गर्छन् जस्तो पनि लागेको थिएन मलाई । खासै महत्व लाग्दैनथियो । अरु ब्यानर जस्तै काम गर्ने हो मात्र लाग्थ्यो । जब मैले यो ठाउँमा आएर काम गरेँ अनि मैले किन ढिला गरेछु जस्तो लाग्यो ।
४. अरु प्रोडक्शन र छविराज प्रोडक्शनमा देख्नुभएका भिन्नता के-के हुन् ?
सबैलाई तुलना गर्न मिल्दैन । कतै के प्लस हुन्छ कतै के प्लस हुन्छ । सबै निर्माताहरु आफ्नो चलचित्रबारे र समग्र चलचित्रबारे चिन्तित हुन्छन् तर त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडी छविराज ओझा हुनुहुन्छ ।
५. यो ब्यानरले बनाउने चलचित्र चल्छ भन्छन् नि, के लाग्छ तपाईँलाई ?
त्यो होईन । जुनसुकै चल्ने भए ‘लोफर’ पनि चल्थ्यो होला । मलाई के लाग्छ भने छवि ओझा चलचित्रप्रति समर्पित मान्छे, चिन्तित मान्छे हो । उहाँको धर्म पनि कर्म पनि यहि भएको हुनाले यहाँको चलचित्र चल्ने गरेका हुन् । छविराज ओझाले एक रुपैयाँ पनि कसैको ठगेको रेकर्ड छैन । जसले पुण्य काम गर्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ ।
६. निर्देशकिय दृष्टिकोणमा ‘हवल्दार सुन्तली’ कस्तो चलचित्र हो ?
निर्देशकिय दृष्टिकोणको मात्र कुरा गर्ने हो भने धेरै कुराहरु गल्ती छन् । मैले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । यस्तो काम गरेको भए हुनेथियो भन्ने मलाई महशुस भईरहेको छ । ‘हवल्दार सुन्तली’ सबै कुराले राम्रो छ भन्ने महशुस गरेँ भने मैले यो भन्दा राम्रो चलचित्र बनाउन सक्दिन । त्यसकारण पनि मेरा कमिकमजोरीहरु धेरै छन् । बजार, बजेट जस्ता कुराले कहिँ न कहिँ छवि ओझा तथा ऋषि लामिछाने जस्ता चलचित्रकर्मीलाई अंकुश लगाईरहेको हुन्छ । त्यस्ता पेरिफेरी छन् तर आम चलचित्र भन्दा अलिकति सभ्य र अलिकति भव्य पक्कै छ ।
७. बायोपिक र फिक्शन दुवै चलचित्र भनिएको छ, कसरी सम्भव भयो ?
यो चलचित्र सुन्तली धामीको बायोग्राफी होइन । सुन्तली धामीको जीवनीमा बनेको वृत्तचित्र होइन । एउटै कुरा के हो भने सुन्तली धामीको जीवनमा घटेको एउटा घटना हो । त्यो घटनाले उनको जीवन आज नारकिय रुपमा बितिरहेको छ । अथवा त्यो घटनाले उ अहिलेपनि पिडित छिन् । यो एउटा घटना मात्र हामीले उठाएको हो । सुन्तली धामीको बलात्कार अघिको जीवन र पछिको जीवनलाई चलचित्रमा उतारेका छैनौँ ।
८. चलचित्रको नामले त उनको बायोग्राफी बुझाउँछ नि !
चलचित्रको नाम सुन्तली धामी राखेका छैनौँ । उनको जीवनी बनाएको भए हामीले ‘सुन्तली धामी’ नाम राख्ने थियौँ । बायोग्राफी होइन त्यसकारण नाम ‘हवल्दार सुन्तली’ राखेका छौँ ।
९. चलचित्रमा सुन्तली धामीको घटना एउटा किस्साको रुपमा राख्नुभयो । अगाडी-पछाडी कस्तो फिक्शन छ ?
उक्त घटनालाई एउटा किस्साको रुपमा नबुझ्नुस् । त्यहि एउटा घटनाले मानिसको जीवन कति पिडादायी बन्न सक्छ, त्यहि घटना नघटेको भए उसको जीवन कति स्वर्णिम हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ ।
१०. भनेपछि चलचित्रको टर्निङ्ग पोईन्ट नै त्यहि हो ?
चलचित्र नै त्यहि घटना हो । तर, त्यो घटनाले निम्त्याउने परिघटनाहरु ऋषि लामिछानेको, छवि ओझाको र शिवम् अधिकारीले सोचेका परिकल्पनाहरु हुन् । त्यो घटना अगाडीका घटना पनि हामीले सोचेका घटना हुन् ।
११. कलाकारको काम कस्तो पाउनु भो ?
धेरैजनाले मलाई शिल्पा पोखरेललाई नायिकामा किन लिनुभो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । मैले चलचित्र ‘लज्जा’ हेरेपछि शिल्पा पोखरेलमा धेरै सम्भावना देखेर हवल्दार सुन्तलीको त्यो भूमिकामा शिल्पा बाहेक कुनै पनि कलाकारहरु फिट नदेखेर मैले शिल्पालाई लिएको हो । छवि ओझाले मलाई कुनै दबाब दिनुभएको छैन । किशोर र सविनको कुरा चाहिँ मेरो कथाले मागेको हो । साँच्चिकै भन्नुपर्दा निर्माता-निर्देशकले कलाकार छान्नु भनेको दोश्रो कुरा हो । पहिलो रुपमा स्क्रिप्टले कलाकार छनौट गर्छ ।
१२. चलचित्र त्रिकोणात्मक प्रेमकथा हो ?
त्रिकोणात्मक प्रेमकथा हो तर यति मात्र होइन मानिसको जीवनमा प्रेम, आँशु, हाँसो, द्वन्द्व सबै हुन्छ । मानिसको जीवनमा हुने हरेक घटना-परिघटनाको परिवेश हो ‘हवल्दार सुन्तली’ । बच्चादेखी वृद्धसम्मको कथा चलचित्रमा छ ।
१३. कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभा’को छ ?
नेपाली चलचित्रको भिष्मपितामह मान्छु मैले छवि ओझालाई, उहाँको प्रतिक्रिया पाएको छु । चलचित्रको टिमको बाहेक मैले दर्शकको प्रतिक्रिया पाएको छैन । सबैभन्दा ठुलो स्यावासी निर्माता छवि ओझाबाट पाएको छु । उहाँले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभा’को छ । उहाँले मलाई बधाई दिँदै अर्को चलचित्रको लागी पनि अनुबन्ध गर्नुभा’को छ ।
१४. दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ ?
परम्परागत रुपमा चलिआएजस्तै मेरो चलचित्र हेर्नुहोस् त पक्कै पनि भन्छु । नेपाल अधिराज्यभरि चैत २७ गते ‘हवल्दार सुन्तली’ चल्दै छ । त्यो सँगसँगै म भन्दा माथी मेरो चलचित्र उद्योग छ । चलचित्र बाँच्यो भने मात्र म बाँच्ने हो, म जस्तै हजारौँ बाँच्ने हो । मेरो चलचित्र चल्नुपर्छ र हामीसँगै लाग्ने अरु चलचित्र पनि चल्नुपर्छ । सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।
म्यूजिक भिडियो निर्देशक समाजले भिडियोको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने
नेपाल म्यूजिक भिडियो निर्देशक समाजको कार्यसमिति बैठकले म्यूजिक भिडियोका बिभिन्न श्रृजनात्मक पाटोमा काम गर्ने निर्देशक,
‘एक्स ९’ मा राज कटुवालको प्रवेश
मुकुन्द भट्टको निर्देशनमा बन्न लागेको एक्सन-थ्रिलर चलचित्र ‘एक्स ९’ मा अभिनेता राज कटुवाल अनुबन्ध भएका
इन्दिराको पछि लागेका दिलीप बने ‘जिम्माल बा को छोरो’ (भिडियो)
काठमाण्डौ। गायिका इन्दिरा जोशी र गायक रमेश बाबुको आवाजमा रहेको नयाँ रोमान्टिक गीत ‘जिम्माल बा
अर्जुन कुमार भन्छन्, ‘साउथ चलचित्रको हिन्दी डबदेखि किन तर्सिनु ?’
कोरोना महामारीका कारण दर्शकहरुले लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र हलमा गएर हेर्न पाएका छैनन् । दशैंमा
‘एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड’ मा पल र शिल्पा उत्कृष्ट मोडल (सूचीसहित)
‘तेस्रो एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड’ भक्तपुरको बोडेमा शनिबार सम्पन्न भएको छ । नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा
के फेरि सहकार्य गर्दैछन् ‘जीवनदाता’ का तीन नायक ?
एक समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएका नायक हन्, विराज भट्ट र रमित